IML: sekoly ambony amin’ny fahaiza-mitarika | NewsMada
IML: sekoly ambony amin’ny fahaiza-mitarika
Hisokatra, ny janoary 2019 izao, ny sekoly ambony Institut malagasy de leadership (IML). Fiaraha-miombon’antoka eo amin’ny Ivontoerana fianarana politika (IEP), ny Foibe fianarana ny diplaomasia sy ny paikady (CEDS), ny mpitantana sady mpampiofana amin’ny fahaiza-mitarika (leadership) ary ny orinasa DHL iraisam-pirenena. Hanome fiofanana matanjaka sy mahomby ny mpitantana ny orinasa tsy miankina sy ny seha-panjakana samihafa, hananana ny kolontsaina mahay mitarika sady manan-danja. Ao anatin’izany ny Andraikitra sosialin’ny orinasa (RSE), hananana toe-tsaina mahay mikaroka sy manatsara. Nambaran’ny talen’ny fanabeazana ao amin’ny IML, fa “hita amin’ireo mpitantana maneran-tany io kolontsaina io, ary nohadihadian’ny mpikaroka matihanina, toy ny Gallup na ny Talent +”.
Fampiharana ny 75%
Hanomboka ny 19 janoary 2019 ny fisoratana anarana, ary hiditra ny 5 marsa 2019 kosa ny andiany voalohany. Haharitra telo volana ny fiofanana ka ambony latabatra ny 25% fa fampiharana ny tetikasan’ny vondron’ny mpianatra ny 75%. Handalinana ny fahaiza-mitarika ny iray volana voalohany. Fanomezan-danja ny singa mafonja isaky ny mpiofana ny faharoan’ny volana ary hampiroboroboana ny fahaiza-mitarika ny volana fahatelo.
Nilaza ny filohan’ny ILM, Rakotondraibe Mamy, fa “vavahady misokatra ho an’izay hiditra eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa ity sekoly ity satria mivoatra ny teknolojia niomerika sy ny fihariana toekarena, sns. Tanjonay sy ny CEDS ary ny IEP ny hanome fiofanana avo lenta araka ny rafi-piofanana iraisam-pirenena atao any amin’ny firenena 220, ho an’ny mpitantana avy amin’ny firenena samihafa maherin’ny 10 000.